Rfid Lf / hf / uhf Reader / umbhali abavelisi - China Rfid Lf / hf / uhf Reader / umbhali abaxhasi kunye nefektri
Ikhadi yesitshixo sehotele enemigca
Elungiselelweyo Enye iikhowudi ehotele ezifakwe kwiikhowudi
Ikhadi zeplastiki ngaphaya
I-pcb erugged mobile ye-smartphone yewindows i-android 9.0 ephathekayo i-uhf rfid ibhakhowudi yeskena se-pda 4g
Uyilo lwephedi yamaqhosha kunye neyabantu enobunzima be-5.5 intshi yeGorilla Glass 3 yokuchukumisa isikrini kunye nesisombululo esiphakamileyo se-720 * 1440 isiboniso siya kudibana nemigangatho ephezulu kulungiselelo, ukuthengisa kunye nokuthengisa.
I-Android Industrial PDA iBluetooth yeWifi egcinwe ngesandla yeRFID yesiphelo seKhompyuter yeSixhobo seKhowudi yeBhakhowudi
Iimveliso ze-MD5000C ze-serial zandisa ii-serial zeMveliso eziPhathwayo ezingenazingcingo kwi-Android OS 7.0 enonxibelelwano ngesantya esiphezulu senethiwekhi. Ngaphakathi kwesixhobo esiphathwayo esiphathwayo, inqanaba lokutywinwa kobungqina bamanzi / uthuli lwe-IP65, ukusinda kwe-1.5m / 4.5ft, uyilo lwe-ergonomic, ulwakhiwo lokubumba ngaphezulu, iteknoloji ekhawulezayo yokutshaja, kunye ne-5.0 intshi enzima Iglasi yeGlasi yeGlasi 3 zonke zixhotyisiwe ukuqinisekisa ukusebenza . Inkqubo yakutshanje ye-1.3GHz ye-quad-core 2GB ye-RAM / 16GB yeROM ukuya kuthi ga kwi-32GB yolwandiso zonke ziyilelwe ukukhulisa inqanaba lamava.
Ixabiso eliphantsi lokuHamba ngeBhakhowudi kwiBhakhowudi yeSoftware yePda yeRFID Reader
Iimveliso ze-MD947H ze-serial zandisa ii-serial zeMveliso eziPhathwayo ezingenazingcingo kwi-Android OS 7.0 ngonxibelelwano olukhawulezayo lwe-4G yenethiwekhi.
Ixabiso eliphantsi le-OEM eligcinwe ngesandla eligcina izixhobo ze-PDA Pos ze-UHF zeRfid Reader
Iimveliso ze-MD801NB ze-serial zandisa ii-serial zemveliso ezingenazingcingo kwi-Android OS 7.0 yecwecwe lezemveliso. Ngaphakathi kwiziphelo zeethebhulethi yecompact, inqanaba lokutywinwa kobungqina bamanzi / uthuli lwe-IP65, ukusinda kwe-1.5m / 4.5ft, uyilo lwe-ergonomic, ulwakhiwo lokubumba ngaphezulu, ibhetri enkulu yangaphakathi ye-8000mAh, kunye nescreen se-Gorilla yeGlasi 3 yesikrini esine-8.0 zonke zixhotyisiwe ukuqinisekisa ukusebenza. I-1.5GHz ekhawulezayo ye-octa-core processor 2GB ye-RAM / ye-16GB yeROM ukuya kuthi ga kwi-128GB yolwandiso zonke ziyilelwe ukukhulisa inqanaba lamava.
I-Supermarkt Inkxaso ye-PDA QR yeKhowudi yokuKhangela iMfonomfono yokuHlawuliswa kweFowuni yePDA
Iimveliso ze-MD711H ze-serial zandisa ii-serial ze-Handheld-Wireless zemveliso kwi-Android OS 7.0 yecwecwe lezemveliso. Ngaphakathi kwiziphelo zeethebhulethi ezixineneyo, ukutywina ubungqina be-IP65 yamanzi / ubungqina bothuli, i-1.5m / 4.5ft yehla ukusinda, uyilo lwe-ergonomic, ulwakhiwo lokubumba ngaphezulu, ibhetri enkulu yangaphakathi ye-10000mAh, kunye ne-7.0 intshi ye-Gorilla Glass 3 9H isikrini sonke sixhotyiselwe qinisekisa ukusebenza. Inkqubo ekhawulezayo ye-1.3GHz ye-quad-core 2GB ye-RAM / ye-16GB yeROM ukuya kuthi ga kwi-32GB yolwandiso zonke ziyilelwe ukukhulisa inqanaba lamava.
Ukuchukumisa isiCwangciso seNkqubo yoHlawuliso ye-Hardware ye-POS yeXabiso loMatshini weNkqubo yeWindows yeWindows kwiRejista yeMali yokuThengisa
Ezi zixhobo zingasentla ziqinisekisiwe unyaka omnye !!
I-P18-L2 yeKhadi leBhasi esemthethweni ye-USB ibhasi yokufunda ikhadi le-smart
I-P18-L2 Bus Validator ixhasa onke amakhadi ahambelana ne-ISO14443 Type A & B, Mifare Classic, DESFire, FeliCa, eyakhelwe ngaphakathi kwiprosesa enamandla ye-32bit ARM Cortex-A9. Zine iziseko ze-SAM zokubamba ii-SAM zokuThenga ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kwentengiselwano.
Nxibelelana neKhadi le-IC Reader nge-USB ujongano
I-T6 yamkela i-RS232 kunye ne-USB interface, islut yekhadi. Ukuhanjiswa kwamandla ngombhobho okanye kwi-USB interface kunye ne-USB ixhotywe ngetekhnoloji engaqhubiyo. I-M6 ibalaseleyo kuba ixhasa amakhadi ama-4. Indawo ephambili yekhadi ilungele imo yokusebenza eqhelekileyo
I-T200 yeMetro Reader yeModyuli yokuNxibelelana ne-RS232 ujongano lweLinux 3.0 yeShishini leLeverl Metro Amatikiti oMfundi weKhadi
I-T200 ngumfundi okwinqanaba lomzi-mveliso ukulungiselela ukulungiswa kwetikiti zemetro. Ixhasa onke amakhadi e-smart ahambelana ne-ISO14443
Chwetheza i-A & B, Mifare, eyakhelwe ngaphakathi kwiprosesa enamandla ye-1G Hz ARM A9 yokuqhuba i-Linux OS. Kwaye zininzi ii-SAM slots zokuxhasa iinkqubo ezininzi zamaqhosha.
I-T10-DC2 Imodyuli yeSmart Card Reader yeModyuli yeNkxaso ye-ISO7816 yekhadi lokunxibelelana / lokunxibelelana / ikhadi lemagnethi
I-T10-DC2 yimodyuli yokufunda ngo-3-in-1 / imodyuli yombhali, kubandakanya amakhadi oqhakamshelwano, amakhadi angaqhagamshelwa kunye namakhadi emigca kazibuthe. I-T10-DC2 iza ne-eriyali efumanekayo, qhagamshela isinxibelelanisi sekhadi elilumkileyo, intloko kazibuthe kunye neziseko ze-4 ze-SAM.
Umfundi we-D8N NFC 13.56Mhz umbhali wekhadi lokufunda ikhadi le-NFC ye-RS232
Isifundi se-D8 NFC sisifundi esidityaniswe ne-PC esivumelana nezinto ezikhethiweyo ze-NFC, ephuhliswe ngokusekwe kwitekhnoloji ye-13.56MHz yokunxibelelana. Ine-4 SAM (Imodyuli yokuFikelela eKhuselekileyo) enokunika ukhuseleko oluphezulu oluninzi kwimicimbi yokunxibelelana.
13.56MHZ ISO14443 Uhlobo lwe-A / B Isifundi seKhadi leSmart
Umfundi we-NC8 ongenamakhadi okufunda ngaphandle kwekhadi elinxibelelana ne-PC elingenakunxibelelana lekhadi / umbhali ophuculweyo kwiTekhnoloji ye-13.56MHz yokuNxibelelana (i-RFID) kunye nokulandelwa koNxibelelwano lweeNdawo ezikufuphi (i-NFC), exhasa kungekuphela nje amakhadi e-ISO 14443 A kunye ne-B kodwa ne-NFC kunye neFeliCa ubuchwepheshe obungenakunxibelelana, ukuthotyelwa kweCCID.